कमजोरी गर्भावस्था मा। को कारण
कमजोरी गर्भावस्था मा - एकदम सामान्य छ। भविष्यमा आमाको जीव त्यहाँ सबै व्यवस्था हर्मोन स्तर परिवर्तन थपिएका छन् एक विशाल भारी छ, एकदम परिवर्तन।
हरेक महिलाको व्यक्तिगत लक्षण लागि कमजोरी को कुनै विशेष परिदृश्य। कसैले बेचैनी सँगसँगै कसैले manifestations लागि लगभग सम्पूर्ण गर्भावस्था धेरै दुर्लभ छन्। सायद गर्भावस्था को कमजोरी पहिलो trimester हुन्छ र तेस्रो मा भेट्टाउने गर्न सक्नुहुन्छ।
विभिन्न रोगबाट को Manifestations र अक्सर गर्भावस्था को अवधि भर पर्छन्। पहिलो trimester मा, धेरै महिला प्रारम्भिक toxicosis बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ। यो हर्मोन परिवर्तन संग सम्बन्धित छ। यो समयमा, त्यहाँ बच्चालाई बढ्न लागि आमाको शरीर को पुनर्गठन गर्न योगदान गर्ने हर्मोन को ठूलो मात्रा उत्पादन जो placenta, को सक्रिय विकास हो। गर्भावस्था को समयमा यस्ता कमीकमजोरी, बिहान रोग जस्तै आफ्नो नयाँ स्थिति अनुकूल शरीर को एक पक्ष प्रभाव भनिन्छ गर्न सकिन्छ।
Toxicosis उत्पन्न हुन सक्छ, र एकदम बलियो हुन सक्छ। प्रति दिन 4-5 पटक उल्टी को सामान्य उपस्थिति, र एउटा सानो वजन, तर यदि उल्टी बढ्छ को संख्या र profuse लालास्रवण र एक ठूलो वजन सँगसँगै छ, महिला चिकित्सा ध्यान आवश्यक छ। बच्चा गर्न विषाक्तता र हानि को बलियो संकेत। आमा शरीर निर्जलित छ र भ्रूण जो धेरै खतरनाक छ र पनि गर्भपात गर्न वा विभिन्न malformations नेतृत्व गर्न सक्छन्, कम पोषक र अक्सिजन प्राप्त गर्दछ। अक्सर, यो मामला मा, expectant आमा hospitalization र उपचार शरीर समर्थन र विषाक्तता को लक्षण कम गर्न प्रस्ताव गरिनेछ।
हरेक महिला चक्कर आना रूपमा गर्भावस्था मा एक कमजोरी सँगसँगै छ। यो शरीर को circulatory प्रणालीमा परिवर्तन को परिणाम हो। जहाजहरु हुन्छ ठूलो बढ्छ परिसंचरण र कुल रगत मात्रा। केही अवस्थामा, कारण को uterine जहाजहरु मा बढ्दै दबाव छ। चक्कर आना दोस्रो र तेस्रो trimester थप सामान्य छ। अप, खडा जब तेज, परिवर्तन स्थितिहरू सीधा यो कमजोरी नै प्रकट। यो एक दबाव ड्रप परिणामस्वरूप, कारण मस्तिष्क देखि रगत को अचानक outflow गर्न हुन्छ। त्यसैले, तपाईं बस जोडले, हाम फाल्न सक्छ अन्यथा यो बेहोशी गर्न सक्छ।
यस्तो गम्भीर चक्कर आना र बेहोशी रूपमा गर्भावस्था मा कमजोरी ट्रिगर र कम रक्त शर्करा, यो भोजन वा पोषक कमी बीच धेरै लामो अन्तरालहरुमा हुन्छ सकिन्छ। त्यसैले यसलाई तरकारी, फलफूल र प्रोटिन-धनी खाद्य पदार्थ समावेश गर्नुपर्छ जो शासन र आहार, पालन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
Vertigo विशेष गरी गर्मी, एक लामो र एक stuffy unaired कोठा मा रहेको छ। तसर्थ, गर्भवती बस गर्मी मा एक प्रशंसक वा वातानुकूलन आवश्यक छ। तर पनि तीव्र गर्मी संग कोठा नियमित, प्रसारित गर्नुपर्छ कार्बन डाइअक्साइड को अन्यथा संग्रह हुनेछ semiconscious राज्य, तर पनि टाउको दुखाइ मात्र होइन। अचानक गर्भावस्था को समयमा कमजोरी देखा पर्नुभयो र महिला आउँदै syncope महसुस भने, मस्तिष्क गर्न रगत प्रवाह बढ्छ। यो गर्न, (तपाईं सिर्फ आफ्नो तकिया अन्तर्गत राख्न सक्छ वा पर्खाल विरुद्ध तिनीहरूलाई दुबला गर्न) सुत्न र खुट्टा उठाउनु। तपाईं सुत्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंले एक गोडा मा प्राप्त र यदि zavzyvaya laces रूपमा मोड गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि बेहोशी अक्सर पर्याप्त हुन्छ, यो जोखिम छैन र एक्लै घर नछोड, र यो कमजोरी बारे आफ्नो डाक्टर सूचित गर्न निश्चित हुन राम्रो छ, यो कुनै पनि रोग को कारण हुन सक्छ।
जन्मदिन नियन्त्रण नियन्त्रण गोलहरू गर्दा वा गर्भनिरोधक प्रकार कसरी छनौट गर्ने गर्भवती हुन सक्छु
कारणहरू, प्रभाव र सिफारिसहरू - किन गर्भवती स्नायु हुन सक्दैन छन्
किन ovulation पछि तल्लो पेट खींचती? ovulation पछि दुखाइ के?
यदि एक कंडोम विश्रामहरू के गर्न?
आनन्द लागि प्रतीक्षा, 36 हप्ता गर्भवती
आधारभूत ब्लेक रणनीति
कार मा तेल प्रतिस्थापन - सिजन वा रन मा?
प्रिन्ट पूरा सेट आयताकार - सजिलो, छिटो र सस्तो विकल्प
बेरक टाइजुइयन्ज: एक राम्रो टर्की अभिनेत्री
बस दबाइ "Ambrobene" बारे: विरामीहरु लागि प्रयोगको लागि निर्देशन
Herbicide "शस्त्रागार": सामा विरुद्ध लडाई मा सबै भन्दा प्रभावकारी उपकरण
उपकरण, पुस्तिका: साधारण टिभी बाहिर एक "स्मार्ट टिभी" कसरी बनाउने
चक्की बिना टाउको दुखाइ को कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न
"Analgin - दबाइ को कुनैन 'विवरण
यी असामान्य सामाग्री चाँडै कार सिट उत्पादन हुनेछ देखि